Muqdisho nasiib xumaa: Fallanqeynta wareysigii uu TARSAN ku ceeboobay |
Muqdisho nasiib xumaa: Fallanqeynta wareysigii uu TARSAN ku ceeboobay
Wax ka sheegga Muqdisho ma waxay ku biireen ereyadii lagu tuugsan jiray?!!
Waxaan daawaday mid kamid ah wareysiyadii Soomaalida lagu yiqiin ee layaabka lahaa, waxaa wareysigan bixiyay Guddoomiyihii hore ee Gobolka Banaadir Max’ud Axmed Nuur (Tarzan). inkastoo hadalada Tarzan aan ka maqlay aysan wax badan ka duwaneyn kuwo hore hoggaamiyaaal soomaaliyeed ku hadleen marka ay noqoto Af-lagaadada Magaalada Muqdisho loo geysto maalin walba & aqoon-darada ka heysata habka jawaabaha loo siiyo warbaahinta haddana wareysigani wuxuu kuwii hore kaga duwanaa isagoo ka baxayay idaacad Ajanabi ah halka kuwa kale ay TV-yo Soomaali ah qaadayeen. Waxaa intaa dheeraa oo isoo jiitay su’aalo si toos ah Md Tazan loo weydiiyay kuwaas oo isaga shakhsiyaddiisa taabanaya, laakiin laga yaabo in uu su’aalo caadi ah isaga qaatay.
Bal aan u soo daadago qormadeyda anoo isku dayaya in aan wax ka iftiimiyo guud ahaan wareysigii Tarzan & waxa aniga shakhsi ahaan iiga baxay.
Wareysigan oo sida aan soo sheegay nuxurkiisu labo qeybood ka koobnaa ayaa su’aalaha qaar waxaa wax laga weydiiyay macnaha masuuliyadda & arinta kale oo ah Magaaladii uu ka soo shaqeeyay ee uu weliba asal ahaan ka soo jeedo ee Muqdisho iyo waxa uu kala kulmay markii uu halkaa tagay. Muxuuse Tarzan kaga jawaabay su’aalahaa la weydiiyay? Aan ku hormaro arrinta Masuuliyaddiisa khuseysa:
Tarzan mar la weydiiyay sababta uu shaqadan u qaatay isagoo waajibaad kale oo REER ka mid yahay saarnaayeen wuxuu caddeeyay in markii uu shaqada guddoomiye-nimada doonayay in ay walaalihii & reerkiisuba (xaaskiisa) kula taliyeen in uusan qaban shaqadaa sidaana isku af-garteen haddana markii dambe wuxuu caddeeyay in ballantii reerkiisa & walaalihiiba uga baxay. Sida su’aasha marlabaad loogu celiyay ayaad ka fahmi kartaa isku xirnaanta howsha uu Tarzan sheeganayo in uu doontay & midda uu meesha cidlada ah uga dhaqaaqay ee reerkiisa ku saabsan & sida ay u kala muhiimsan yihiin una kala horreeyaan. weliba iyagoo kula taliyay in uusan aadin haddana ka doorbiday dantiisa gaar ahaaneed.
Dabcan isagu ma fahamsaneyn muhiimadda ay su’aashan u leedahay ka masuul ahaan, waxa la durayayna waxay aheyd waajibaadka saaran shakhsi ahaan. fahamka su’aashaa ku jiray wuxuu ahaa sida aad ugu dhiiran karto in aad qabato xil noocaas ah adigoo midkii ka muhiimsanaa ee xaqa ahaa reerkaagana ku saabsanaa weliba caruuro kujiraan meel cidlo ah uga dhaqaaqday. Micnaha su’aashaa xambaarsaneyd ayaa ahaa in aadan masuul noqon karin haddiiba tii xaqa laguugu lahaa aad dayacday waxaase laga yaabaa in isagu su’aal isaga qaatay.
Dadka qaar baa si siyaasadeysan su’aashan oo kale uga jawaaba oo wax kala daboola marka ay gartaan in khalad galeen laakiinTarzan jawaabihiisa kama fiirsane khaladkii ayuu halkii ka sii miisay isagoo weliba isku caddeynaya in howl dhan oo uu masuul ka ahaa ka cararay. Macnaha kale ee su’aashani xambaaraneyd ayaa ah in arrintani Guddoomiye Tarzan keligii khuseyn laakiin dadka loo tusayay in Madaxda Soomaalidu intooda badan sidaa oo kale yihiin oo inta caruurahooda meel cidlo ah uga tagaan xilal Soomaaliya ka doonta. Dadka noocaas ahna ay yihiin dadka Soomaali matala, sababta ay Soomaaliya la degi la’dahay ay taasi ka mid tahay.
Su’aal kale waxay aheyd markii Tarzan la weydiiyay hadal uu hore u yiri kaas oo ku saabsanaa in qofkii Alshabaab ka tirsan ee la qabto halkiisa lagu dilo. Dhaqan Muslim & mid Ajanabi meelna kuma arag in qof wuxu doono ha ahaadee isaga oo nool la qabtay isla bartiisa lagu toogto xitaa Maxkamad ayaan sidaa amri karin iska daa shakhsiye, maadaama ay kasoo horjeeddo islaanimada, bani’aadantinimada & xuquuqda qofka. Waa laga yaabaa in uusan dareensaneyn sababta su’aasha loo weydiinayo taas aheyd in loo caddeyo in Tarzan hadal adag oo aan munaasab aheyn dambina loogu soo oogi karo uu hore u yiri. Sidoo kale arrintan waxay dadka tusineysaa hoggaan-xumada madaxda Soomaalida heysata & iyagoon aqoon u laheyn waxay ay qabanayaan iska doonta, dabadeedna waxay doonaan isaga hadla.
Hadalada Tarzan ee uu dad kale ku jaa’ifeeyay waxaa ka mid ahaa wuxuu sheegay in Madaxweynihii talada hayay markii uu guddoomiyaha noqday waa Sh Shariife in uu siiyay lacag 100,000 oo dollar ah si uu howsha ugu bilaabo. Halkaa waxaa laga fahmi karaa ama ka soo baxeysa Tv-guna ummadda daawaneysa tusay arrinta beesha caalamku marar badan ku celcelin jireen taas oo ah in Soomaaliya ay tahay halka ugu musuqmaasuqa badan caalamka.
Xaggee lagu arkay Madaxweyne Guddoomiyihiisa lacag kaash ah siinaya? Meeye intii u dhaxeysay labadaa shakhsi, sida wasiiradii, agaasimayaashii, hanti dhowrkii, masuuliyiintii Bankiga iwm. Hantida ama dakhliga ay hey’ad dowladeed ku shaqeeneyso ma waxaa gooya oo bixiya hey’adaha qaabilsan shaqadaas mise Madaxweyne ayaa siiya Guddoomiye? Tarzan isaga oo aan ka fiirsan jawaabta uu bxinayo wuxuu si dadban u sheegay in Madaxweynihii dhammaa ee dalka uu musuqmaasuqa koow ka ahaa. Mar kale halkaa waxaa laga fahmi karaa in hey’addii ugu sarreysay ee Dowladda ay sidaa ku shaqeyso markaa waa sabab kale oo Soomaaliya la degi la’dahay, guddoomiye Tarzan’se jawaab ayay ka aheyd.
Ku darso oo Tarzan markuu dakhligiisa ka hadlayay markii shaqada loo dhiibay wuxuu ku sheegay in ay ZERO (eber) aheyd haddana ilbiriqsiyo gudahood ayuu ku caddeeyay in 125 doolar ay khasnadda ku jirtay. Isaga 125 doolar & Zero waa isugu mid halka shakhsiga wareysanaya & inta kale ee luqaddooda koowaad u tahay ay labo tiro u kala yaqaanaan.
Arrin kale oo layaab laheyd waxay aheyd markii Tarzan uu si xun oo weliba ka damqasho laheyn wax uga sheegay Magaalo Soomaaliyeed taas oo weliba sheegata in ay magaalo madaxdii tahay, mararka qaar waxaadba is-oraneysaa dadka Ajanabiga ah ayaa wax uun ceebaheena noo hambeeya marka aad u barbardhigto kuwa Soomaalida sheegta, cid kale Muqdisho wax kama sheegtee waa kuwa ama wax u doontay ama ka soo shaqeeyay. Haddii Muqdisho sidaa noqotay ma iyadaa is-yeeshay mise adigoo Jaalle Soomaali ah ayaa sidaa ka dhigay? Sidaan u fahmaynaTarzan waxay ka aheyd in aad wax soo qabatay dadkan Ajanabiga ee ku dhageysanaya u sharrax, mana oga waxa uu akhrinayaa in ay yihiin markhaatiyo caddeynaya in wixii soomaalida & dhulalkooda laga sheegi jiray ay wada sax yihiin.
Md Tarzan wax walba oo uu Magaalada Muqdisho ka sheegi karo waa ka sheegay, ereyada uu isticmaalay idiin sharrixi maayo oo markaad dhageysataan ayaad fahmi doontaane.
Guddoomiye Tarzan ma aha qofkii ugu horreeyay ee sidan oo kale u hadla waxaan soo aragnay kuwo weliba isaga ka aqoon badan oo Jaamacado dunida ku yaalla wax ka soo dhigay oo mararka qaar aad is-oraneyso toloow kuwan kuwii shaqada siiyay maxay u sheegeen markii loo oggolaanayay ayaa siday doonaan wax uga sheegay Magaalo Soomaaliyeed oo hadaladooda ayba dhici karto in dhibaato kusoo gaarto shacab Soomaaliyeed oo magaaladaa ku nool. Mararka qaar waxaan is-weydiiyaa wax ka-sheegga Muqdisho ma waxay ku biirtay ereyadii lagu tuugsan jiray si dhaqaale loogu helo kuwaas oo ay ka mid ahaayeen Argagixisada, burcad-badeedda iwm.
Intaa oo keliya ma aheyn hadalada layaabka igu riday ee aanTarzan ka maqlay ee waxaa sidoo kale ka mid ahaa isagoo sheegtay in uu isagu ahaa shakhsiga keliya ee u jawaabi karay Alshabaab, madaxda inteeda kalena Ashuun ku adimi jireen, xitaa marka lagu daro Madaxweyneha. Wasiirkii Warfaafinta isaga & Tarzan wixii wareysigan kadib dhex maray waa sheeko kale
Isku soo wada-duub waxaan oran karnaa su’aalihii la weydiiyay Md Tarzan midna sidii la rabay uma abbaarin in uu uga jawaabo, bal waxaa laga yaabaa ceebo markii hore qarsoonaa in uu bannaanka keenay, tanina waxay ka tarjumeysaa fudeydka mararka qaar waalida u dhow oo siyaasiyiinta Soomaalida kala kulano marka ay wareysiyada bixinayaan.
Wareysiyada noocan oo kale ah waxay ku tusineyaan aqoondarida & waayo-argnimo-xumada heysata kuwa sheegta in ay Soomaliya hoggaamiyayaasha u yihiin.
buy zoloft online without prescription, buy dapoxetine online. W/Q: Farah M Warsame